တကယ်လို့များ…. တစ်ဒေါ်လာက်ို….. | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » တကယ်လို့များ…. တစ်ဒေါ်လာက်ို…..
Posted by နွေဦး on May 30, 2013 in Creative Writing, Think Different | 32 comments
အရက်သမားအိမ်ထောင်ဦးစီး နွေဦးရဲ့ လေရူး
နိုင်ငံခေါင်းဆောင်ဟာ အိမ်ထောင်ဦးစီးနဲ့တူသတဲ့ ။
ဆိုပါစို့ အဖေလိုမျိုးပေါ့ ။
တိုင်းသူပြည်သားတွေဟာလည်း သားသမီးတွေနဲ့တူပါသတဲ့ ။
စီးပွားဖက်နိုင်ငံများက ဖခင်ရဲ့မိတ်ဆွေများနဲ့တူပါသတဲ့ ။
ကိုယ့်သားသမီးတွေကို မုန့်ဝယ်ကြွေးမယ် မုန့်ဖိုးပေးတယ်ပေါ့ ။
ကိုယ်ပေးလိုက်တဲ့ မုန့်ဖိုးလေးနဲ့ ငါ့ခလေး ဘာများဝယ်စားလဲပေါ့ ။
အဖေတယောက်အနေနဲ့ဆို ဒီလိုတော့ စဉ်းစားမိမှာပါ ။
ငါ့သမီးလေး ငါပေးတဲ့ပိုက်ဆံ တစ်ထောင်နဲ့
မုန့်တစ်ခုမှရရဲ့လား.. နှစ်ခုရရင် ကောင်းမှာဘဲ..
သုံးခုသာဆိုငါ့သမီးလေး ဝဝလင်လင် စားရမယ်လို့ တွေးမိသလားဘဲ..။
လစာ ရတဲ့ နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတယောက်ရဲ့
လက်ထဲက ပိုက်ဆံ တစ်ထောင်ဟာ….
တစ်ဒေါ်လာမှ ရရဲ့လား.. နှစ်ဒေါ်လာမှရရဲ့လား..
ငွေတစ်ထောင်ကို သုံးဒေါ်လာလောက်ရရင် ငါ့နိုင်ငံသားတွေ
ချမ်းချမ်းသာသာ နေနိုင်မယ်လို့ တွေးမိရဲ့လားဘဲ…။
ပိုက်ဆံနှစ်ထောင်ပေးပြီး မုန့်နှစ်ခုဝယ်စားဘို့ ပေးမယ်ဆိုတဲ့..
အိမ်က အဖေက သူ့မိတ်ဆွေတွေနဲ့ ညနေဆို အရက်ဆိုင်ထိုင် ..
ဒီကြားထဲ သမီးလက်ထဲကပိုက်ဆံလေး တန်ဘိုးမရှိအောင်လုပ်နေသေးတော့….။
မနေချင် အိမ်ပေါ်က ဆင်းသွားတဲ့….။
ကျုပ်တို့နိုင်ငံလည်း အဲလိုအဖေနဲ့ နေရတဲ့ မိသားစုလို…
အနက်ပွားလေး တွေးရရင် ဖြင့် ..
သားသမီး ဆိုတာ မိဘ ကို ရွေးချယ်ခွင့် မရပေမယ့်
ပြည်သူဆိုတာ အစိုးရကို ရွေးခွင့် ရသင့် ပါရဲ့ဗျာ..
in democracy people get what they deserve
ဆိုလား … မားးးးခိုမ် တခါတခါ ထထရွတ်တတ်တာလေးပါ.. အာဟိ
945.00 / USD
ဒါကတော့ ဒီနေ့ ဗဟိုဘဏ်ဈေးနှုံးပါပဲ…
ပြည်တွင်းမှာတင်ဒေါ်လာစားနေသူတွေ အတွက်တော့ ကောင်းပြန်ရော။
မြန်မာငွေတန်ဖိုးကျတော့ အင်ပို့သမားတွေအတွက်က မကောင်းပြန်ဘူး…
ကျုပ်အထင်တော့ တစ်ထောင်ဝန်းကျင်ရောက်ရင် တန့်သွားမယ်ထင်ရဲ့။။
မြန်မာငွေတန်ဖိုးကျတော့ အင်ပို့သမားတွေအတွက်က မကောင်းပြန်ဘူး…”
အဲလိုလူမျိုးတွေက အလွန်ဆုံးရှိမှ သိန်းဂဏန်းပါဗျာ..
ပြီးတော့ သူတို့ မငတ်ကြသေးပါဘူး…
သူတို့ကို ငဲ့ပြီးတော့ ကျန်တဲ့သန်း၆၀လောက်က ငုတ်တုတ် ခံကြ ဆို ….?
Exporter Importer ဆိုတာကို လူတန်းစား သပ်သပ်ထားတွက်ရင် ဆိုရှယ်လစ်အတွေးအခေါ်ကြီးအတိုင်း ဖြစ်နေမှာပေါ့။
ကျန်သန်း ၆၀ကလည်း ဒီအလုပ်နဲ့ ဆက်စပ်နေတာပါပဲ။
လယ်သမားလက်ကထွက်တဲ့ ပဲ၊ပြောင်းနှမ်း၊စပါး အကုန် အိတ်စပို့လုပ်နေရပါတယ်။
အိတ်စပို့ရှိတဲ့ ကုန်မှ ဈေးကောင်းရလို့ လယ်သမားစိုက်ရကျိုးနပ်ပါတယ်။
ခုခေတ်လယ်သမားက ငွေဈေးလည်း နားထောင်ပါတယ်။
သူ့ကုန်ကို ဗိုက်မနာရင် ဒေါ်လာဈေးနားထောင်ပြီးမှ ရောင်းကြပါတယ်။
(ရန်ကုန်ကလူတောင် မသိတဲ့ ဈေးနှုန်းတွေကို စကိုင်းနက်ကပြောသွားတာလို့ ပြန်ပြောပြကြသေးတယ်)
အင်ပို့ကလည်းး ပြည်ပအားကိုး ပုဆိန်ရိုးက တစ်ပြည်လုံးပဲလို့ ပြောကြသလို အပ်ကစ ကွန်ပျူတာအဆုံး အင်ပို့ချည်းပါပဲ။
တောလက်ကျေးရွာတောင် တီဗွီလေးတော့ ကြည့်ကြသေးတာ။
ဒါကြောင့် သန်း၆၀နဲ့ သိန်းဂဏန်းကိုခွဲမမြင်ကြပါနဲ့။
ကျပ်-ဒေါ်လာဈေးကလည်း.. ဒေါ်လာကတက်တာပါ..။ ကျပ်ကကျတယ်လို့.. သိပ်မထင်ကြောင်း..
ယူအက်စ်က.. ရေနံတွေအပြင်ကမ၀ယ်တော့ပဲ.. သူ့ပြည်တွင်းမှာထုတ်မယ့်အပြင်.. ပြန်တောင်ရောင်းစားမဲ့… သဘောမြင်နေရပါပြီ..
ရေနံရောင်းနိုင်ငံတွေ.. လာမယ့်၁၀စုနှစ်အတွင်.း.. မျက်ဖြူဆိုက်တော့မယ်ဖြစ်ကြောင်း…
ဒေါ်လာငွေတွေလည်ပါတ်အောင်… ဒီကမ္ဘာကြီးမှာ.. စစ်ပွဲကြီးတွေ.. ပဋိပက္ခတွေ… လုပ်ရမှာဖြစ်တာမို့… ဒီတချီမှာ.. ယူအက်စ်ရဲ့.. မျက်စိဘယ်နေရာကျတယ်ထင်ကြပါသလည်း…
US exports crude oil to China | South China Morning Post
Apr 18, 2013 – US crude oil production will soon surpass oil imports. Photo: MCT. The US has started exporting crude oil to China for the first time since 2005, …
How the US Oil, Gas Boom Could Shake Up Global Order – CNBC.com
Apr 1, 2013 – Without fanfare, China passed the United States in December to become the world’s leading importer of oil—the first time in nearly 40 years that the U.S. … upheaval in countries and regions heavily dependent on oil exports.
ဘာတဲ့ “ကြာရင်……..နဲ့ ငါး အရုပ်ရေးပြရမယ်ဆိုဘဲ..”
သများကို မျက်ရည်မဆည်နိုင်ဖြစ်မယ့် သဒင်းဒေ မတင်ပါနဲ့လား ကွီ
သများ မေ့ထားဒဲ့ ကိစ္စဒွေဘာာာာ.
(အိုက်ဒါဒွေက အာပဲ ပေးတတ်တဲ့ အာပေး ဆိုတဲ့ ကွန်ဇာဗေးတစ် ၀ံဂျီးဂျုပ် ဇုတ် ကြောင့်..)
စကားမစပ် ဒီက ငွေလွှဲတွေ ခုနောက်ပိုင်းခေတ် (ကားသွင်းခွင့်ရပြီးနောက်ပိုင်း)
ပါရာဒိုင်း တွေ အပြောင်းအလဲ ဖြစ်နေသဗျ…။
ဦးဦး ဟလုမိုတိုလည်း ဒီမြေ အနေကြာဖူးမယ်မှတ်တယ်…
ရန်ကုန်မှာ ဘဘ တွေပြောင်းတော့ တိုကီယိုက ဘာဘာ က ရွှေတွေလည်း အပြောင်းအလဲတွေ ပေါ်သပေါ့ဗျာ
(ရှောဆိုင်း သိချင်ယင်တော့ ကွကိုယ် အသိမေးကျိပါ…)
သများ ကတော့ ဘယ်တယောက်ကိုမှ မကြည်လို့ တကျပ်မှ မလွှဲဘု …ဟီးးး
(တကယ်က ကွကိုယ် သုံး-မလောက်တာ..)
ရွာပြန်ပြီး အဟွာခံ စားတာပဲ အေးဘာဒယ်ဗျာ..
ဒေါ်လှ အကြောင်း မပြောကြပါနဲ့။
ရင်ဘတ်ထဲက အောင့်အောင့်လာလို့ပါ (စီဒီ တူ ကြက်အူလှည့်)
ခုဆို နိုင်ဂျန် ဂတ်ခြားမှာ စားရိတ်တွေ တက်လွန်းလို့ စားချင်တာတွေ ဝယ် မစားနိုင်တာ ကြာပါပြီ။
လူလည်း ပိန်ကျပြီး လူရုပ် မပေါ်တော့ပါဘူး။ အဟွတ်။
ကိုယ်မရောက်ခင်က ဒေါ်လှ ကြီး ဈေးကောင်းသဟဲ့ ဆို နန့်နန့်တက် နိုင်ဂျန်ဂါးကို သွားချင်နွန်နွံ့။
ရောက်ပြီး တစ်လ နေတော့ ရွှေဝါရောင် တော်လှန်ရေးအပြီး ကျပ် တို့ တရိပ်ရိပ်တက်ပြီး ဒေါ်လှကြီး တရိပ်ရိပ်ကျလာတာကို ရင်နာနာနဲ့ ကြည့်နေခဲ့ရသူပါ။
ခုထိလည်း လိုချင်သလောက် မတက်သေး။
ငွေဈေး တက်ပါစေ ကျပါစေ ဆုလည်း မတောင်းကောင်းသမို့ ခုတော့လည်း ဘယ် ဈေးပေါက်ပေါက် လက်ခံရတော့တာပဲ၊
ဒီနေ့ ပြောချင်တာတွေကို ဖဘမှာလည်း မရေးရဲ။
ရွာထဲမှာလည်း မရေးရဲလို့ ဘယ်မှာ ရေးရမတုန်း လိုက်ရှာနေတာရယ်။
ဖေချစ် သားသမီးတွေကလည်း များသားလား။
ခုတော့ ဦးနွေဦးကြီးက မုန့်ဖိုး ပိုက်ဆံဘက်က ရေးသွားပြီ။
ဖေကြီး မအားဘူး။ နိုင်ဂျံဂါးသွားရဦးမယ်။ အိမ် အတွက်………တဲ့။
ဖေကြီး နေကောင်းဘူး။ စက်တတ်ထားရတာရယ်။
ဖေကြီး အိမ်ထောင်ဦးစီးနေရာကလည်း ဖယ်ပေးနိုင်သေးဘူး။
ဖေကြီး သားဆိုးတွေကိုလည်း မဆုံးမနိုင်သေးဘူး။
ဖေကြီး …………………………………. နိုင်သေးဘူး။
ဖေကြီးကို ဘာမှ မလုပ်နိန်ဘူး မပြောနဲ့။
လုပ်နိုင်တဲ့ ဖေ့ ဖေကြီးဒွေ ပြန်ခေါ်လိုက်မာ။ ဒါပဲ။
ဘယ်သူ့ ကိုမှ မရည်ရွယ်ပါ။ တိုက်ဆိုင်မှု ရှိရင် တည့်တည့်ပြောခြင်းဖြစ်၏။
ဟေ့ ဘပြောင်စိန် ကို မထိနဲ့ကွ…
ဟိုအူးလေး မူးဇော် အလိုတော်အရဒေါ့
လည်လည်သွားရင်း ဆန်ရှင်ဒွေကို (အလုံးစုံ)အလုံးစုံ ဖယ်နိုင်အောင် လုပ်နိုင်တာ ဒို့အဘ ကွ။
ညီးဒို့ နှုတ်ခမ်းနီနဲ့ မိတ်ကပ်လိမ်းတဲ့ ဘွားဒေါ်ယီးတုန်းက အလုံးစုံ ဖယ်နိုင်ဂဲ့ဒါ မဟုတ်ဘု ကွ။
ကွ. .ကွ. ..ကွကွ…။
ဟိ ..အဲ့လိုနဲ့ပဲ တကွကွ နဲ့ ပျော်ပျော်ယီး လော်ဘီ လုပ်ဂျလေသဒီးပေါ့ဗျာ…
ဒါနဲ့ ခီညားတို့လည်း ခက်စ်တယ်.. အဘတို့ ထမင်းရောင်းတယ် မုန့်ဟင်းခါးရောင်းမယ် ဆိုတော့
မတ်တပ်ရပ် လက်ခုပ်တီးဒယ်… ဟော ..နန်းဂလေး အကြော်ရောင်းတော့ မီးဒုတ်ရှို့ဒယ်…။
ကိုယ်တော်လေးဖျား ..ကိုယ်တော်လေး ရဲ့သားတော်လေး ဘုရားဝတ်ပြုသွားတာ ပြန်မလာဘုရယ်..
အော်.. ထူးခြားဆန်းပြား မြန်မာ့ဖေ့စဖုတ် သတင်းများပါကွီ …ကွိကွိ…
နဂိုထဲက အဖေ မဟုတ်ပါဘူး ကိုနွေဦးရယ်။
လက်နက်နဲ့ ခြောက်ပြီး ကျုပ်တို့ အိမ်ကို သိမ်းထား၊ ကျုပ်တို့ကို နှိပ်စက် နေတဲ့ ဓားပြကြီးတွေပါ။
သင်းတို့က အဖေမှ မဟုတ်တော့
ငွေဈေးတက်တာကို အရင်တုန်းကတော့ အပြစ်မြင်ခဲ့တယ်။
ငွေဈေးတွေကျရင် ပိုပြီး စားနိုင်သုံးနိုင်လို့ အရောင်းအ၀ယ်တွေကောင်းပြီး စီးပွားဖွံ့ဖြိုးလာမယ်လို့ ထင်ရပေမယ့်….
တကယ်တမ်း ငွေဈေးတွေကျသွားတုန်းက တောင်သူလယ်သမားတွေ ချွတ်ခြုံကျသွားခဲ့တာ သိပ်မကြာသေးပါဘူး။
တစ်ခါတုန်းက (အတော်လေးတော့ ကြာပါပြီ)….
စင်္ကာပူစီးပွားရေးကျတော့ ၀န်ကြီးချုပ်လီကွမ်ယုက တိုင်းသူပြည်သားတွေကို စားကြသုံးကြဖို့၊ ငွေကို အိပ်ယာအောက်မထားကြဖို့နဲ့ ထားခြင်းထားရင် ဘဏ်မှာအပ်ထားဖို့ ပြောတယ်လို့ ဂျာနယ်တစ်ခုမှာ ဖတ်ဖူးတယ်။
သာမန်အမြင်နဲ့ဆိုရင် စီးပွားရေးကျရင် ခြိုးခြံချွေတာ သုံးစွဲရမှာလို့ မြင်ပေမယ့်….
တစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့တွက်တော့ ငွေရတဲ့သူက သုံးစွဲမှ အရောင်းအ၀ယ်တွေကောင်းမယ်။
အရောင်းအ၀ယ်တွေကောင်းမှ လူတွေအလုပ်ရကြမယ်။ စီးပွားဖြစ်ကြမယ်ဆိုပဲ။
Domino Effect လို့ပဲ ခေါ်မလားတော့ မသိဘူး။
လူငယ်တွေ.. ငွေမသုံးမဖြုန်းပဲ.. တရားစခန်းဝင်တာတွေကို.. ကျုပ်ဘာလို့အပြစ်ပြောနေခဲ့သလည်း.. အမတော်နည်းနည်းသဘောပေါက်နိုင်မလားမသိဘူး..
ငွေဆိုတာ.. လည်ပါတ်.. လှည့်ပါတ်ရပါတယ်..။ မှန်ကန်တဲ့လည်ပါတ်မှုရှိရပါတယ်..
အမတော်လို.. လုပ်ငန်းရှင်ကိုပြောရတာ.. ရီစရာလိုဖြစ်နေပေမယ့်… တနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့.. အဲဒီအိုင်ဒီယာက.. သာမန်လုပ်ငန်းရှင်တိုင်းမှာရှိနေမှဖြစ်မယ်လို့.. ယူဆမိတယ်..
အဲဒီလိုဖြစ်အောင်. အသိပေးရာမှာ.. . မီဒီယာတွေတာဝန်အရေးကြီးတာပါ…
အမေရိကားရဲ့..အဓိကပို့ကုန်ဟာ.. စက္ကူတွေလို့.. ပြောဖူးခဲ့တယ်..
စက္ကူကို ကမ္ဘာသုံးဒေါ်လာ(ငွေစက္ကူ)ဖြစ်အောင်လုပ်ရာမှာ.. အမေရိကန်တွေ.. အင်မတန်ကျွမ်းကျင်ကြောင်း..
လာပြန်ပြီလော။ ဒီ တရားစခန်းဝင် ကိစ္စ။
တရားစခန်းမှာလဲ ဝင်ကြေးပေးမှ ထမင်းစားရတာ သူကြီးမင်းရဲ့။
တရားစခန်း ကလည်း အဲဒီ ငွေ နဲ့ အစားအစာတွေ ဝယ် ရတာ။
ကျုပ် အဖိုး၊ အဖွား များ ခေတ် က MBA မရှိပေါင် တော်။
ဒါဟာ Experience ကနေ သင်သွားတာဘဲ။
ဝါသနာ နဲ့ စိတ်ဝင်စားဖို့ဘဲ လိုတာ။
ဝါရန်ဘတ်ဖက် Warren Buffett ဆိုတာလဲ ငယ်ကထဲ က သူ့ဟာသူ ကို စိတ်ဝင်တစား အရောင်းအဝယ် လုပ်ခဲ့တာ။
ပြောချင်တာက MBA တွေ၊ Master ဘွဲ့ တွေထက် စိတ်ပါဝင်စားမှု နဲ့ အခွင့်အရေး ရရှိမှု က အရေးကြီးကြောင်း ပြောချင်တာ။
အဲဒီ ကပ္ပိယ တွေထဲမလဲ မြုပ်နေတဲ့ မီးခဲ တွေပါနိုင်သပေါ့။
ကျပ်ကကျတာ မဟုတ်ပဲ ဒေါ်လာကတက်လာတာပါ ဆိုတာကို မြင်တတ်ကြဖို့ လိုမယ်ထင်ပါတယ်။
ကျမကိုယ်ပိုင်အတွေးနဲ့ဆိုရင်တော့ လူငယ်တွေ ငွေမသုံးမဖြုန်းတာနဲ့ တရားစခန်းဝင်တာကို တစ်တွဲထဲမကြည့်ပဲ ခွဲခြားကြည့်လိုက်ရအောင်။
သင်္ကြန်မှာ သောက်စားပျော်ပါးပြီး သုံးဖြုန်းတာ လူမှုရေး၊ စီးပွားရေး၊ ကျန်းမာရေး အလုံးစုံထိခိုက်စေပါတယ်။
ဒါတောင် သံသရာအတွက် ကုသိုလ်ရေးကို ထည့်မတွက်သေးဘူး။ :buu:
တရားစခန်းဝင်ကြတဲ့အတွက် ငွေလည်ပတ်စီးဆင်းမှု မရှိဘူးလို့တော့ ပြောမရဘူးထင်ပါတယ်။
လူဆိုတာ အိမ်မှာပဲနေနေ၊ တရားရိပ်သာမှာပဲနေနေ
ထူးပြီးတော့ ချွေတာသလို ဖြစ်မသွားတာမို့
စားသုံးတာ မလျော့ဘူးလို့ ထင်ပါတယ်။
ဒါ့အပြင် ရိပ်သာဝင်လို့ သဒ္ဒါတွေပေါက်ပြီး ဇရပ်တွေလှူ၊ ကျောင်းတွေဆောက်ကြရင်
ဆောက်လုပ်ရေးပစ္စည်းတွေ ရောင်းရလို့ ငွေလည်ပတ်စီးဆင်းမှုကိုတောင် အားပေးသေးတယ်။ :hee:
အဲ- ပြောမယ့်သာ ပြောရတယ်။
ကိုယ်တိုင်ကတော့ လုပ်ငန်းရှင်ဆိုပေမယ့် မိရိုးဖလာလုပ်ငန်းရှင်မို့ ကမ္ဘာနဲ့ယှဉ်တဲ့ အသိပညာအတွေးအခေါ်ပိုင်းမှာ အားနည်းညံ့ဖျင်းတာတော့ အမှန်ပဲ။
အဲဒါကြောင့်လည်း သဂျီးရဲ့ ရွာထဲကနေ မတူထူးခြားတဲ့ အတွေးအခေါ်တွေ အသိအမြင်တွေ သိရကြားရတာကို သဘောကျလို့ ဒီရွာမှာ အခြေချနေထိုင်ဖြစ်ခဲ့တာပါပဲ။ :hee:
အဲလိုဈေးတတ်တော့ ထွက်ခဲ့မိတဲ့ Duty Free အလုပ်လေးကို နှမြောမိသား…
ဆက်လုပ်ရင် ခုလောက်ဆို တော်တော်၇နေလောက်ဘီ :'(
အဲဒါတွေ ကို ကြိုသိလို့ 
၁၀ ဒေါ်လာ တိတိ ၉၀၀ ဈေးနဲ့ ဝယ်စုထားတယ် ကိုနွေဦးရေ
အဲ့တုန်းက လက်ထဲ သိန်း၅ထောင်လောက် ချမ်းသာရင်
အားလုံး ဒေါ်လာနဲ့ ချိန်းပစ်ခဲ့ချင်တာကလား
” တကယ်တမ်း ငွေဈေးတွေကျသွားတုန်းက
တောင်သူလယ်သမားတွေ ချွတ်ခြုံကျသွားခဲ့တာ ၊
ဟုတ်ပါတယ် ၊ ဒေါ်လာဈေးကို ဆွဲတင်နေတာက ၊
တစ်တိုင်းပြည်လုံး စီပွားရေး တက်ဖို့ပါ ။
တစ်ဦး တစ်ဖွဲ့ အတွက် လုပ်နေတာ မဟုတ်ပါဘူး ။
ကမ္ဘာ့ဘဏ် ၊ IMF တို့ရဲ့ အကြံပေးချက် အရလည်း ပါပါတယ် ။
ဥပမာ ။ ။ သြဇီ ဒေါ်လာ တန်ဖိုးတက်တာကို အဘ တို့ မကြိုက်ပါဘူး ။
အဘ တို့ ( သြဇီ နိုင်ငံသား ) တစ်ဦးချင်း အတွက် ကောင်းပေမယ့် ၊
သြဇီ နိုင်ငံကြီး အတွက် မကောင်းပါဘူး ။
အဘ ကတော့ သြဇီ နိုင်ငံ တစ်ခုလုံးရဲ့ အကျိုးစီးပွားကို ပိုလိုလားပါတယ် ။
ဒေါ်လာဈေး တက်တာလဲ မကြိုက်ပါဘူး ၊ ကျတာလဲ မကြိုက်ပါဘူး ။
၁၀၀၀ လောက်မှာ ငြိမ်နေရင်တော့ ကောင်းမယ် ထင်တယ် ။
တွက်ရတာလဲ လွယ်တာပေါ့ ။
GDP နဲ့ INFLATION အကြောင်း ထဲထဲဝင်ဝင်ပြောရရင် ပိုရှုပ်ပေမည့်…
ငွေဈေးငြိမ်တာကိုတော့ အားလုံး နှစ်ခြိုက်ကြမယ်ထင်ပါတယ်…
အထူးသဖြင့် နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားလုံးက ငွေဈေးမငြိမ်ရင် အလုပ်မလုပ်ချင်ကြဘူး…
ငွေဈေးတက်တော့ ဒေါ်လာစားတွေကပျော်ပေမည့် ကျပ်သမားတွေက ထိတာပေါ့…
“စပါးကုန်သည်နဲ့ သားရေ(သရေ)ကုန်သည်၊ ကုန်ရောင်း/ကုန်ဝယ် သလို ဖြစ်နေပြီထင်ရဲ့”
“တစ်ခါတုန်းက (အတော်လေးတော့ ကြာပါပြီ)….
စင်္ကာပူစီးပွားရေးကျတော့ ၀န်ကြီးချုပ်လီကွမ်ယုက တိုင်းသူပြည်သားတွေကို စားကြသုံးကြဖို့၊ ငွေကို အိပ်ယာအောက်မထားကြဖို့နဲ့ ထားခြင်းထားရင် ဘဏ်မှာအပ်ထားဖို့ ပြောတယ်လို့ ဂျာနယ်တစ်ခုမှာ ဖတ်ဖူးတယ်။”
ဘဏ်စံနစ်အာမခံရှိဖို့နဲ့ သွင်းထုတ်လွယ်ကူလျှင်မြန်ဖို့ အလေးထားဆောင်ရွက်သင့်ပါတယ်..
ငှက်ကထဂျီး ဦးရွှေမန်း ပြောထားတဲ့ စကားကြောင့် တက်ရဲတယ် ထင်တာပဲ..။ ဘယ်လိုတက်တက် ဈေးကွက်သဘောကို မလွန်ဆန်ဖို့တော့ လိုတယ်။ တခုရှိတာ ဒေါ်လာ မြင့်တော့ အင်ပို့သွင်းကုန်ဈေး တက်လာတယ်။ အစိုးရက အင်ပို့တင်သွင်းမှုကို လျော့ချဂျင်လို့များလား.. ဒါဆို အင်ပို့သွင်းကုန်ပစ္စည်း အစားထိုး (ဥပမာ – အချိုမှုန့်၊ စားအုံးဆီ၊ ဆေးဝါး၊ စက်ပစ္စည်း၊ အိမ်ဆောက်ပစ္စည်း၊ လူသုံးကုန်၊ စားသောက်ကုန်… ) လုပ်ငန်းတွေ အင်အားကောင်းရမယ် မြေတောင်မြှောက်ပေးတဲ့ မူဝါဒ ကျင့်သုံးရမယ်။ ဒါဆို နိုင်ငံဒေါ်အတွက် နှစ်ပြန် အကျိုးရှိနိုင်တယ်။ အကုန် လိုက်မလုပ်နိုင်တောင် တနိုင်တပိုင် ဥပမာ- နယ်စပ်ကသွင်းတဲ့ စားကုန်၊ လူသုံးကုန်လို အသေးစားလုပ်ငန်းတွေ ခေါင်းထောင်လာရင် သာဓုခေါ်စရာပဲ.. နို့မို့ရင်တော့ သိပ်မနိပ်ဘူး။
ကျွန်တော်တို.တော့ ငွေဈေးတက်ချင်သလောက်တက် ကျချင်သလောက်ကျ……. ပေးသလောက်ယူ ရသလောက်သုံးပဲ………ဟိဟိ..
အော် ကိုနွေဦးရေ.. တင်စားမှုလေးကောင်းလိုက်တာ..
အခုတော့ အဖေ အသစ်ရောက်လာပါပြီဗျာ…. သူခမျာလဲလုပ်နေရှာတာပေါ့.. အခုတော့ ငါးတကာယိုဒဲ့ချီး ပုဇွန်ဆိတ်ခေါင်း ဆိုတော့ ခေါင်းပေါ်က ချီးတွေ ဆေးချနေရရှာတော့လဲ……..
သားသမီးတွေ မုန်.ဖို.လောက်လားမလောက်လား အရေးမစိုက်နိုင်ရှာဘူးပေါ့ဗျာ….. သားသမီးတွေကလဲ ကောင်းတဲ့သူရှိသလို…. အဖေသိက္ခာ ချနေတဲ့သူတွေလဲ ရှိသကိုးဗျ………
သာမန်အားဖြင့်.. ဒေါ်လာဈေးတက်ရင်.. အင်ပို့ကျပြီး.. အိပ်စ်ပို့တက်ရတယ်..။ တိုးရစ်အလည်ဝင်လာတာများရတယ်..။
by Mdy Boy (Notes) on Friday, May 31, 2013 at 6:13am
ကျွန်တော့်လို ပရမ်းပဒါ မဟုတ်ဘဲ အချက်အလက်နဲ့ ရှင်းပြတဲ့ ပညာရှင်တွေ ရဲ့ အဆိုကိုတော့ လက်ခံလောက်ပါရဲ့နော်..
ကျွန်တော်ကတော့ ကျွန်တော့်ခလေး ပိုက်ဆံတထောင်နဲ့ မုန့်သုံးခု ရစေချင်တာပါဘဲဗျာ..။
ဒေါ်လာဈေးမတက်ရင်တော့ ဒေါ်လာစားတွေ ကုန်သည်တွေငိုရမှာပဲ။ ဒေါ်လာဈေးမတက်တော့လဲ ကုန်ဈေးနှုန်းကမကျတော့လဲသိပ်တော့မထူးပါဘူး။ ကုန်ဈေးနှုန်းကိုပဲချရမယ်ထင်ပါ တယ်။ ပြည်တွင်းမှာ ထွက် နေတဲ့ ပြည်တွင်းဖြစ်စားသောက်ကုန်တွေကိုနှိုက်က ဒေါ်လာဈေးနဲ့မပါတ်သက်ပဲ တဟုန်ထိုးတက်နေ တာက တထောင်ဖိုး သုံးခုမရခြင်းရဲ့အဖြေလို့ထင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အခြေခံစားသောက်ကုန်တွေရဲ့ ကုန်ဈေးနှုန်းပဲအရင်ချသင့်တယ်လို့ ထင်မိပါတယ်။